बरूणले किन आफैंले खेलेकाे चलचित्रलाई चल्न लायक नै थिएन भने ? | Makalukhabar.com
बरूणले किन आफैंले खेलेकाे चलचित्रलाई चल्न लायक नै थिएन भने ?
असार ३, भारत । लगातार ११ वटा हिट फिल्म दिएपछि वरुण धवनको कलंक बक्स अफिसमा नराम्रोसँग फ्लप भयो । उनका पछिल्ला दुई फिल्म ‘अक्टोबर’ र ‘सुई धागा’ ले समिक्षकको राम्रो प्रतिक्रिया नपाए पनि फिल्मले बक्स अफिसमा ठिकै व्यापार गर्यो । वरुण धवनले कलंक फ्लप भएपछि आफू निकै प्रभावित भएको तर यस मार्फत् आफूले अनुभव पनि पाएको बताए ।
वरुणले भने, ‘जनतालाई कलंक मन परेन । यो मेरो लागि एउटा पाठ हो । मैले यस मार्फत् सिकेँ । धेरैपटक सोचेको अनुसार काम हुँदैन र सबैकुरा गलत हुने गर्छ । म पहिलो पटक असफलताबाट गुज्रिएको हुँ र यसले मलाई निकै प्रभावित गर्यो । यदि प्रभावित नभएको भए मलाई आफ्नो फिल्मसँग प्रेम थिएन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
स्मरण रहोस्, वरुण धवनलाई शशांक खेतानको फिल्म रणभूमिका लागि पनि फाइनल गरिएको छ । यद्यपि, अहिले उनी स्ट्रिट डान्सरमा पूर्ण रुपमा व्यस्त छन् । फिल्म अर्को वर्ष जनवरी २४ मा रिलिज हुँदैछ । एजेन्सी
कांग्रेसद्वारा संसदमा नाराबाजी, बैठक स्थगित